Home | Parbatkhabar
विज्ञापन को लागि
# नेपाली चलचित्र
सुदूरपश्चिममा एचआइभी संक्रमण दर बढ्दो
सुदूरपश्चिममा एचआइभी संक्रमण दर बढ्दै गएको छ । देशमै सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको कैलालीमा एक वर्षमा मात्रै एक सय ५२ जना संक्रमित थपिएका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीका अनुसार गत वर्ष जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ६ हजार एक सय १३ जनामा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये एक सय ५२ जनामा एचआइभी संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए । नयाँ फेला पर्ने संक्रमितमध्ये अधिकांश भारतमा रोजगारी गरी फर्केका र उनीहरूका श्रीमती तथा यौनकर्मी रहने गरेका छन् । गत वर्ष पत्ता लागेका नयाँ संक्रमितमध्ये ५५ जना भारतबाट फर्केका र उनीहरूका परिवारका सदस्य छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक सय २५ जना, ०७४/७५ मा एक सय १५ र ०७५/७६ मा एक सय सातजनामा नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । देशभरमै सबैभन्दा बढी एचआइभी संक्रमित भएको जिल्लामा पर्ने कैलालीमा अहिले एक हजार चार सय ४६ जनाले नियमित रूपमा एआरटी सेवन गरिरहेका छन् । कैलालीमा सेती प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र मालाखेती अस्पतालमा एआरटी सेवा सञ्चालनमा छ ।
भारतीय रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी नआउनु र परीक्षणको दायरा बढ्नुले संक्रमित पत्ता लाग्ने दर बढ्दै गएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । यद्यपि, विगत वर्षको तुलनामा नयाँ संक्रमित पत्ता लाग्ने संख्या पछिल्ला केही वर्षयता कम हुँदै गएको एचआइभीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमबाट भारतीय रोजगारीमा जानेको संख्या ठूलो छ । त्यहाँ हुने असुरक्षित यौनसम्बन्धबाट कतिपय संक्रमित भएर आउने र संक्रमित भएको थाहा नपाउँदा घरमा श्रीमतीलाई सार्ने गरेका छन् । संक्रमितले असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउँदा बालबालिकामा पनि एचआइभी देखिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धामीले बताए । भारतबाट संक्रमित भएर आउनेको संख्या धेरै भएकाले सुदूरपश्चिममा एचआइभी संक्रमितको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालको एआरटी सेन्टरमा एचआइभी संक्रमितको उपचारमा खटिँदै आएका डा. शेरबहादुर कमर रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म सुदूरपश्चिममा एचआइभी संक्रमण दर घटाउन सम्भव नहुने बताउँछन् ।
भारतमा काम गर्न गएकाहरू संक्रमित भएर आउने र उनीहरूबाट घरमा तिनका श्रीमतीलाई पनि सर्ने भएकाले यहाँ नयाँ संक्रमित फेला पर्ने क्रम घट्न नसकेको डा. कमरको भनाइ छ । ‘अधिकांश संक्रमित आप्रवासी कामदार र उनीहरूका श्रीमती छन्,’ उनले भने, ‘घरबाट टाढा बस्दा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धले संक्रमित हुने र घर फर्केपछि थाहा नपाएरै परिवारलाई सार्ने गरेको पाइन्छ ।’ नयाँ संक्रमित फेला पर्ने दर घटाउन आप्रवासी कामदार र उनका परिवारलाई सचेत गराउने कार्यक्रमहरूलाई व्यापकता दिएर सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ
तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा info@parbatkhabar.com मा पठाउनुहोला । यस पर्ब-खबर (www.parbatkhabar.com) मा सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । हाम्राे कुनै पनि समाचार अनुमति विना साभार गरेको पाइएमा हामी प्रेस काउन्सिल ऐन अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रियामा जाने छौ ।
बैतडी : संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका ३१ जनाको स्वाब संकलन
तुवाँलाे हटेपछि हिमाल हाँस्दा
आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा क्युबाको भूमिका
ओली अकुपाईको अर्थ
डिजिटल भुक्तानीको नाममा गैरकानूनी धन्दा
पोको एक्स३ एनएफसीःवास्तविक मिडरेन्ज च्याम्पियन
जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन मलेसिया नेपाल भित्र्याउँदै
गृहमन्त्री बादललाई गृहनगरमा कालो झन्डा
अध्यक्ष : सन्तोष पाठक
फोन न. : 9846832201
प्रबन्ध निर्देशक : सन्दिप पाठक
फोन न. : 9857663371
© 2020 - 2022 PARBATKHABAR - ALL RIGHTS RESERVED